စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပုဂ္ဂလိက Instagram အကောင့်တစ်ခုထူထောင်ခြင်းသည်ကောင်းပါသလား။ ➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
ကကုမ္ပဏီအတွက်ပုဂ္ဂလိက Instagram အကောင့်နေရာကောငျးသလဲ
ဇန်နဝါရီလ 20, 20190မှတ်ချက်များ 1621
သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး Instagram ကိုအကောင့်တဲ့အခါမှာသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ရှာအံ့သောငှါ ကုမ္ပဏီစတင်ပါ, နောက်လိုက်များကိုရှာပါ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အခြားနည်းဗျူဟာများစွာတို့အကြားအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအကောင့်များစွာရှိသည်။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့အတွက်ကောင်းလှ၏ ကုမ္ပဏီမှပုဂ္ဂလိကအကောင့်ထား Instagram ကို? သငျသညျသစ်တစ်ခုအကောင့်ကိုဖန်တီးသည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်ဒီအများပြည်သူဖန်ဆင်းထားသည် default အနေဖြင့်ဒီလူမှုကွန်ယက်ဖြစ်သောကြောင့်, ဒီသင်၏ပရိုဖိုင်ရနိုင်သူမည်သူမဆိုသင်ပြုစာပေ၏အသီးအသီးတွေ့မြင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
သငျသညျပုဂ္ဂလိက mode မှာသင့်ကုမ္ပဏီရဲ့အကောင့်ထားလျှင်သင်ဘာကိုဆုံးရှုံးနိုင်သလဲ
အမှန် သငျသညျပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကောင့်နေရာမပေးနိုငျသညျ, ဤသည်မူဝါဒများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Instagram ကို။ သငျသညျအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရနေကြသည်ပုဂ္ဂလိကအကောင့်ဖြစ်ရန်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုသုံးဖြုန်းလာသောအခါကံမကောင်းစွာဤအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
Facebook မှာအတူသငျသညျကိုသာတူညီစာမျက်နှာကနေတဆင့်စာပမြေားမျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားကတခြားအခြားအကောင့်များက shared မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ content တွေကိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာ "နဲ့တူ" သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့စာပေမဆိုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ဒီ tab ကိုပေါ်မည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်တွေ့နိုင်ပါသည်သူတစ်အသုံးပြုသူ "နောက်တော်သို့လိုက်" ။
သငျသညျပုဂ္ဂလိက mode မှာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမထားနိုငျသျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျပုဂ်ဂလိကအတွက်နေရာရှိသည်နိုင်ပါတယ်ကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းများအတွက်ခြေလှမ်းများပေးပါလိမ့်မယ်။
Instagram ကို app ကိုသင်ချင်တဲ့အကောင့်နဲ့ဖွင့်လှစ်။
"Options ကို / Settings" ကိုပြောပါတယ်သော option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ဤ action နှင့်အတူသဘောတူရှိမရှိအတည်ပြုဖို့တောင်းတစ်ချိန်ကရှေးခယျြ "ပုဂ္ဂလိကအကောင့်" ကိုရွေးချယ်ပါ။
သငျသညျစိတျထဲထားရန်ရှိသည်အားလုံးမှာလည်းအထက်တွင်ပြအားနည်းချက်များကိုအကောင့်ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူပေါ်ပေါက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သော် ပုဂ္ဂလိကအကောင့်ရှိခြင်းအားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီသင်၏ပရိုဖိုင်တချို့အကျိုးကျေးဇူးများကို generate နိုင်သကဲ့သို့။
အတော်များများကပုဂ္ဂလိကအကောင့်အသစ်များ၏ Instagram ကို သောသူတို့သည်အသုံးပြုသူများသည်ကိုလက်ခံမခံရမီလျှောက်လွှာတင်သွင်းစေ, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိက profile များကိုအာရုံစိုက်ဆွဲရန်ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုမှုအခြားအကောင့်ဖြစ်ကြသည်။
ထိုသို့မှန်ပေမယ့် Instagram ကိုတော်တော်များများကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ် မရင့်ဆိုကုမ္ပဏီတခုပရိုဖိုင်းရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီစီမံကိန်းကိုဤအမျိုးအစားနဲ့ကောငျးတဲ့လက်ခံမှုရှိသည်နိုင်လျှင်ရှည်လျားသောစီမံကိန်းမစတင်မီသင်ဒဏ်ငွေမြှင့်ရမယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
သင်တစ်ဦးလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာရှိရမည်, အဓိကရည်ရွယ်ချက်အများအပြားဖောက်သည်ရောက်ရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်သင်၏အအမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ရုံဒီတော့သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်ချောချောမွေ့မွေ့တတ်နိုင်သမျှသှားလိမျ့မညျသောစွမ်းရည်ရှိနိုင်ပါသည်။
သတိမမူမဖြစ်သင့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုလူမှုကွန်ယက်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အမည်ဖြစ်ပြီးရှိပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလုပျနိုငျကိုအကောင်းဆုံးနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းပြီးလွင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအားလုံးအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာသင်တွေ့ခွင့်ပြုသည်။
အဆိုပါဖော်ပြချက်ကအကြောင်းသုံးလိုင်းများထက်ပိုမိုမယူသင့်ပါတယ်, အလွန်ရိုးရှင်းပြီးဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ကုမ္ပဏီပါဝင်နေသည်အဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြောဆိုသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရန်လိုသိချင်စိတ်တစ်ခုထိပေးပါ။
မေ့လျော့မနေပါနဲ့ URL ကို Add တိုက်ရိုက်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ, ဒီမသာကိုကူညီသူတို့သည်သင့်ကိုပူဇော်ရာ၏ပိုပြီးတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာ, ကဲ့သို့သောသင်၏လူမှုကွန်ယက်ဒါပေမယ့်လည်း home page ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။
ရိုးရှင်းတဲ့ပိုကောင်းနေစဉ်, သငျသညျလုပျနိုငျကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ၏လိုဂိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအားလွယ်ကူစွာသူတို့ကပရိုဖိုင်းကနေသို့မဟုတ်အခြား site မှမြင်ရခြင်းရှိမရှိအသိအမှတ်ပြုရန်နိုငျသောအခြေခံပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က + Instagram ကို
နောက်ပိုင်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တစ်ခုခုနှစ်ဦးစလုံးလူမှုကွန်ယက်လက်၌လက်ကိုသွားဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည် နှစ်ဦးစလုံးအကောင့်လင့်ထားသည် နှင့်တစ်ဦးရှိသည် ကောင်းသောအသွားအလာနောက်လိုက် အကောင့်တစ်ခုနှင့်က forward နှစ်ဦးစလုံး။ ဤသူသည်သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးအကောင့်အသစ်များ၏အပေါ်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာထားပါရန်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ, သင်ရုံက monotony ရှုံးမပါဘဲအကြောင်းအရာပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်။
သင်သည်ထိုသူတို့၏အရည်အသွေးနှင့်အတူ upload သောရုပ်ပုံများကိုသင်အများပြည်သူအားပူဇော်ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်တန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ်ရှိရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းအတွက်ကုန်ပစ္စည်းပြရမယ်ရုပ်တုဆင်းတုများကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်သည်။
အဆိုပါ hashtag တကယ်အရေးကြီးလှသည် ကုမ္ပဏီနေရာချပေးဖို့, သူတို့ကိုမှတဆင့်ကုမ္ပဏီကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောသူတို့ကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူသူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
1 သငျသညျပုဂ္ဂလိက mode မှာသင့်ကုမ္ပဏီရဲ့အကောင့်ထားလျှင်သင်ဘာကိုဆုံးရှုံးနိုင်သလဲ
3 Instagram ကိုများအတွက်ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သိကောင်းစရာများ
3.6 Facebook က + Instagram ကို
3.8 အများအပြား hashtag
သငျသညျစာပမြေား program နိုငျပုံကိုဤနေရာတွင်လေ့လာပါ Instagram ကို